Kindle Vella, serivisy vaovao avy any Amazon ho an'ireo tia mamaky | Ireo mpamaky rehetra
Kindle Vella, serivisy vaovao avy any Amazon ho an'ireo tia mamaky
Joaquin Garcia | | Amazon Kindle, eBooks
Tao anatin'izay volana vitsy lasa izay, azontsika atao ny milaza ao anatin'izay taona vitsy lasa izay, Amazon dia tsy nitarika ny tsenan'ny ebook toy ny fanaony taloha, tsy fanakantsakanana ho azy io hanohizany ny faktiora amina miliara amin'ity tsena ity.
Na izany aza, ny fandefasana nataony tamin'ity herinandro ity dia tsy mahaliana ihany fa mahaliana ihany koa hamorona fironana ao anatin'ny tontolon'ny famakiana Azo antoka fa efa nanomboka ny klone ny orinasa sasany.
Ny fandefasana resahintsika dia Vella mandrehitra, serivisy izay eken'ny sasany ho toy ny kinova mora amin'ny Kindle Unlimited fa aleoko manokana mahafeno fepetra amin'ny maha zanaky ny serivisy ity.
Kindle Vella dia serivisy mitovy amin'ny Kindle Unlimited fa mifantoka amin'ny olona tia mamaky micro, izany hoe famakiana fohy izay tsy mahatratra 20 pejy matetika. Amin'ity tranga ity, Amazon dia nanondro antsika fa tsy hisy ny famakiana teny mihoatra ny 5.000. Araka izany dia manolotra antsika i Kindle Vella famakiana amina toko na andiany maromaro izay ahafahan'ny mpamaky mankafy azy ireo amin'ny vidiny kely.
Tsy toy ny Kindle Unlimited, Kindle Vella dia mamela anao hamaky maimaimpoana ireo toko na boky voalohany ary avy eo raha te hanohy hamaky isika dia tsy maintsy mandoa ny famakiana miaraka amin'ireo mari-pamantarana azontsika vidina avy any Amazon.
Kindle Vella dia serivisy ho an'ireo tia famakiana fohy
Mety ho somary manahirana ihany, saingy toy ny andian-tantara amin'ny fahitalavitra entina amin'ny tontolon'ny famakiana izay malalaka ny fizarana voalohany ary avy eo mila mandoa izany ianao.
Saingy te-handeha lavitra kokoa i Amazon ary nanandrana nampifangaro fironana teknolojia tamin'ity serivisy ity. A) Eny, ny famantarana izay vidiantsika dia tsy hampiasaina hanakalo volavolan-tantara na toko vaovao ihany fa izy io koa dia hiresaka mivantana amin'ny mpanoratra, manaova fanehoan-kevitra na forum momba ny famakiana sasany na hetsika hafa kasaina halamin'i Amazon amin'ireo mpanoratra ny sanganasa sy ny mpampiasa azy.
Kindle Vella dia tetikasa Amazon izay niasan'izy ireo nandritra ny volana maromaro, noho izany dia tsy hahita famakiana vitsivitsy izahay, fa niara-niasa tamin'ny mpanoratra anarivony avy amin'ny fivarotana ebook hitondra atiny amin'ny sehatra vaovao. Mifanohitra tanteraka amin'ny zava-mitranga isika Vakiana famakiana, izay na dia efa ela aza dia mbola tsy manome katalaogy mivelatra amin'ny Kindle Unlimited.
Ny fanombohana ny Kindle Vella dia efa na zava-baovao ihany koa satria tsy mahazatra an'i Amazon. Tsy mahita afa-tsy Kindle Vella ho an'i Etazonia isika, izany hoe, amin'ny alàlan'ny ity tranonkala ity avy amin'ny Amazon.com. Ary, mahaliana fa afaka manao izany koa ianao ampiasao amin'ny alàlan'ny fampiharana Kindle ho an'ny iOS. Eny, amin'izao fotoana izao dia tsy ho azontsika ampiasaina amin'ny Kindle na amin'ny takelaka Amazon. Zavatra nanaitra ny maro ary tsy mino ny sasany.
Mazava ho azy, Kindle Vella dia ho tonga any amin'ny takelaka Amazon sy ireo mpamaky azy, vao mainka aza rehefa mahazo anarana mitovy amin'ny fianakavian'ireo mpamaky izy io, nefa mbola mahavariana ihany.
Mikasika ireo mari-pamantarana, dia tsy ho ny Amazon Coins fa izy io dia marika iray, antsoina amin'izany fomba izany amin'ny Internet, azontsika atao ny fonosana 200 famantarana ho an'ny vidiny maotina $ 1,99 ary ny fonosan'ny mari-pamantarana 1700 amin'ny $ 14,99.
Fantatsika fa Amazon dia niresaka sy niara-niasa tamin'ny mpanoratra an'arivony maro hamorona ity serivisy ity ka tsy mieritreritra aho fa ity serivisy ity dia zavatra manjavona rehefa mandeha ny fotoana na mijanona eo amin'ny tsenan'i Etazonia fotsiny ihany, ka ho fotoana fohy vao ho tonga amin'ny hafa izany. Fitaovana sy fampiharana Amazon, fa ahoana no ahatongavany any?
Amazon miaraka amin'i Kindle Vella dia nanangana safidy mety hahaliana ny mpanoratra, Amazon tenany ary ny mpamaky marisika kokoa: famakiana mialoha. Hatramin'ny nanombohany, Kindle Unlimited dia nanangana adihevitra be momba ny fomba fizarana ny valisoa avy amin'ny ebooks, ao amin'ny Kindle Vella dia handoa vola ny mpampiasa miaraka amin'ny famakiana ary ny vidin'io token io dia zaraina eo amin'i Amazon sy ny mpanoratra. Raha misy mpihaino marobe ny serivisy dia hahazo vola be ny mpanoratra sy Amazon, izay mety ho lasa maodely fandoavam-bola amin'ny Kindle Unlimited. Amin'izany rehetra izany dia heveriko fa ny Kindle Vella dia tsy serivisy hafa fotsiny amin'ny famakiana amin'ny alàlan'ny streaming fa zava-baovao izay manamarika ny tsenan'ny ebook. Mampalahelo fa tsy tonga tany Eropa izy io, saingy afaka mianina amin'ny kinova amerikana isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » Amazon Kindle » Kindle Vella, serivisy vaovao avy any Amazon ho an'ireo tia mamaky
Ny Kobo Clara HD dia lasa takelaka noho ny PostmarketOS
Mamorona efijery e-ranomainty miloko manakaiky ny taratasy mihoatra ny taloha